China DIN Standard Beaded nyore kufurirwa Iron Pipe Fittings fekitari uye vagadziri | Donghuan
Zvinhu: ASTM A 197, ASTM A47, DIN EN 1562
3.Thinda: IS07-1, DIN 2999
4.Size Inowanikwa: 1/8 `` - 6 ''
5.Surface: Hot Dip kwakakurudzira, dema, zingi-kuifukidza
6.Malleable fittings inosanganisira magokora, ma tee, coupling uye round flange etc. Floor flange inozivikanwa kwazvo kusimbisa zvinhu pasi. Yakakwira chaiyo michina isimbiso yemhando. Fekitori yedu ndiyo yekutanga kushandisa chitofu chemagetsi chekukanda uye chishandiso chemagetsi mukugadzira uye kugadzira, kunze kwekuti isu takavandudza zvigadzirwa, zvaishandiswa yero makoko, zvinhu zvinogadzirwa nemutsva wekukanda mutsetse zvisinei kuti mukati kana kunze kwakatsetseka uye kupenya . Yemukati mabhureki haazoonekwe mune zvigadzirwa zvinogadzirwa nemutsva wekukanda tambo. iyo isina kusvibiswa uye iri nyore kudzora iko kuumbwa kwezvinhu. Isu tasimbisa mhando yemhando inoenderana neIS0 9001: 2000 uye tine chitupa cheCRN muCanada, European yeEC uye Turkey yeTSE.
7.Malleable fittings inowanzo shandiswa kubatanidza simbi pombi. Zvisinei, kwakakurudzira nyore kufurirwa fittings anoshandiswa kwakakurudzira nyere. Nyore kufurirwa simbi mutopota Fittings zvakajairika pakati nyore kufurirwa fittings uye zvinowanikwa mumarudzi akasiyana siyana uye hukuru. Kana iwe uine chero mubvunzo nezve izvi fittings kana uchida kutenga imwe, usazeze kutibata nesu.
8.MILLU YOKUEDZA YEKUEDZA
Tsanangudzo: Nyore kufurirwa Iron Pipe Fittings
PASI PASI 0.07
PASI PASI 0.15
9.Mitemo yekubhadhara: TT 30% kubhadhara mari yezvigadzirwa usati waburitsa uye TT iyo bhezari mushure mekugamuchira kopi yeB / L, mutengo wese unoratidzwa muUSD;
Pashure: Mhepo Hose Couplings EU Rudzi
Zvadaro: Mugero Muviri
American Standard dzakasungwa nyore kufurirwa Iron Pipe Fi ...
Stainless Simbi Minyatso, Kubatanidza Air Hose, Air Hose payakabatanidzwa, Stainless Simbi Pipe Minyatso, Stainless Simbi Minyatso Uye Fittings, Mhepo Hose yekubatanidza Europen Rudzi,